I-EFFSC inkqenkqeza phambili kunyulo e-CPUT - Vernac News
EKapa – Umbutho wabafundi oyinxalenye ye Economic Freedom Fighters unkqenkqeza phambili kunyulo lwebhunga labafundi kwiikhampasi ezimbini zaseCPUT.
Iziphumo zekhampasi iMowbray zibonakalisa ukuba abagqatswa beliqela baziphumelele zonke izihlalo. Zife namthanyana inzame ze South African Students Congress (SASCO) kunye ne Pan African Students Movement of Azania (PASMA) zokuqubisana ne EFFSC.
[scribd id=390512788 key=key-YmRJBaXVUkIG8shOC7Io mode=scroll]
Kananjalo nakwikhampasi iBellville, ibethe ngesinye, yatsho igqugqisa zonke izihlalo ebiqubisana ngazo kunye nePASMA neSASCO.
[scribd id=390513365 key=key-nlQuZfoqCXmbfo9Y4WKT mode=scroll]
Zixubile noko iziphumo zaseWellington nalapho abagqatswa abazimeleyo befumene izihlalo ezimbalwa, yaze iSASCO yafumana esinye. Akukacaci ke ukuba kugqityiwe kusini na ukubalwa ngoba kwizihlalo ezimbalwa kubonakalo kungekho bantu bavotileyo.
[scribd id=390513444 key=key-EYknRsueWYboCNGXM7Ql mode=scroll]
Azikaphumi iziphumo zonyulo lwaseDistrict Six emva kokumiswa kobalo ngoLwesihlanu emva kwezikhalazo ezafakwa zinkokheli zabafundi.
Nanjengoba ledyunivesithi inekhampasi ezintlanu, iziphumo zeekhampasi ngeekhampasi zizakudityaniswa kusekwe ibhunga labafundi elizakuquka igcuntswana labo baphumeleleyo abasukwa kwezikhampasi zahlukileyo.
Akukacaci ke ukuba zizakuphuma nini iziphumo zonyulo lwaseDistrict 6. Iinkokheli zabafundi zisixelele ukuba umphathi wenkampani elawula unyulo uzibeke phantsi intambo ekutsheni kwaleveki, isizathu soku asikaziwa. Inzame zokuqhagamshelana nabaphathi balenkampani khange ziphumelele xeshana sipapasha elinqaku.
Tagged CPUT SRC